नेपालमा खाद्यान्न सञ्चित कति छ ? :: Setopati
नेपालमा खाद्यान्न सञ्चित कति छ ?
सुनिता सिटौला काठमाडौं, जेठ ५
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै संसारका धेरै देशमा अहिले लकडाउन छ। आवतजावत तथा मानवीय गतिविधिहरु अवरुद्ध भएका छन्। यसबाट उत्पादनदेखि वितरणसम्म प्रभावित भइरहेका छन्।
यसरी प्रभावित हुँदा संसारका गरिब मुलुकहरु खाद्यान्न अभावमा पर्नसक्ने अध्ययनहरुले अनुमान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य कार्यक्रम 'विश्व खाद्य कार्यक्रम'ले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरु थप खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्नसक्ने अनुमान गरेको छ।
संसारभर थप १३ करोड मान्छे खाद्यान्न अभावमा धकेलिनसक्ने प्रक्षेपन गरिएकाे छ। यसरी खाद्यान्न अभावमा पर्ने नागरिकहरु अफ्रिकीसहित गरिब मुलुकहरु पर्ने छन्। यी मुलुकहरुमा यसअघि नै १३ करोड बढी जनता अपर्याप्त खाद्यान्नमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन्।
राष्ट्र संघीयकाे उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा पर्याप्त तथ्यांक नहुँदा वास्तविक अनुमान गर्न कठिन भएको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन, आवश्यकता तथा अपुगको अवस्था कस्तो छ?
कृषिमन्त्रालयले भने नेपालमा खाद्यान्नको अपुग नहुने बताएको छ। खाद्यान्नको आयात तथा वितरण जारी रहेको तथा उत्पादनका लागि पनि कुनै समस्या नहुने सरकारको तर्क छ।
सरकारकाअनुसार नेपालमा वर्षेनी १ करोड टन बढी खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छ। केही बालीको उत्पादन वर्षमा केही तलमाथि भएपनि करोड टनमुनि उत्पादन नहुने कृषिमन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले जानकारी दिए।
नेपालका लागि मुख्य अन्नबाली धान हो। जुन सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ। मन्त्रालयकाअनुसार यो वर्ष ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत न्यून हो। तर गहुँ तथा मकैको उत्पादन बढ्ने भएकाले समग्र अन्न उत्पादनमा कमी नआउने केसीको भनाइ छ।
‘हामीले अहिलेसम्म संकलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन तथा मागबीचमा केही अन्तर रहेको छ। नेपालमा कूल ३३ लाख टन चामल उत्पादन हुन्छ। तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार ३५ लाख टन चामल आवश्यक हुन्छ। सर्वेक्षअनुसार एक व्यक्तीले वर्षमा १२२ किलो चामल खान्छ।
चामलको माग जम्मा २ लाख टन अपुग भएपनि भारतबाट आयात ६ लाख टन बढी आयात हुन्छ। नेपालमा मसिनो चामल उत्पादन नहुने भएकाले आयात बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
यद्यपी संकटको समयमा स्वदेशी उत्पादनले नै पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ। यो वर्षका लागि त आयात पर्याप्त भइसकेकाले अभाव नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
अहिलेसम्म चामलको आयातमा कुनै पनि अवरोध आएको छैन। यदि महामारीका कारण आयात रोकिएपनि अपुग चामलको मागको गहुँ, मकै, फापर जस्ता अन्नबाट सहजै पूरा हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
उत्पादन र भण्डारमा मागको तुलनामा कुनै अभाव नभएको सरकारले बताएपनि लकडाउनको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न अपुग भएको छ। तर यो तत्कालका लागि वितरण प्रणालीमा चुस्तता नहुँदाको परिणाम भएको प्रवक्ता केसी बताउँछन्।
यद्यपी अपुग भएको खण्डमा सरकारी खाद्यन्न व्यापार गर्ने कम्पनीहरुले ढुवानीकाे व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। माग, आपूर्ति र सञ्चयको तथ्यांकको विश्लेषण पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मागअनुसारको खाद्यान्न पुर्‍याउनका लागि आयात की उत्पादन बढाउने विकल्प बाहेक अरू केही नभएको उनले बताए।
'उत्पादन बढाउन जग्गा बाँझो नराख्ने, सिचाइँ बढाउने, उत्पादन बढाउने जातका बिऊको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने बिऊ, मल, आवश्यक औषधिको समयमै पुर्याउने नीति सरकारलेल्याएको छ। वर्षे धानको उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौ' उनले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, ०२:४२:००